လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် ရန်ကုန်ရှိ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြည့်နေသည့် ၄ဝဝ ဗို့ ဓာတ်အား?? - Yangon Media Group
လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် ရန်ကုန်ရှိ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြည့်နေသည့် ၄ဝဝ ဗို့ ဓာတ်အား??
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လျှပ်စစ်အန္တ ရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ နေသည့် ၄ဝဝ ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးနေရာများတွင် ABC Cable ကြိုးများဖြင့် အစားထိုးကာ ဦးစားပေး အဆင့်အဖြစ် မိုင် ၅ဝဝ ခန့်ကို လဲလှယ်ရန် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း လျှပ်စစ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုး ပြတ် တောက်ပြီး မြေပြင်ပေါ်သို့ပြုတ်ကျမှုများကြောင့် ဓာတ် လိုက်သေဆုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသဖြင့် ဓာတ်လိုက် မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော SAC လျှပ်ကာဓာတ်ကြိုး များ လဲလှယ်မှုကို မည်ကဲ့သို့ အစီအမံချ၍ ဆောင်ရွက် နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောက်တံတား မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးနေမျိုးထက်က နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးအတွက် ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြည့်‌နေတဲ့ ၄ဝဝ ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးနေရာတွေမှာ ABC Cable များ ဖြင့် ထပ်မံလဲလှယ်နိုင်ရန်အတွက် ပထမဦးစားပေးအဆင့် အဖြစ် မိုင် ၅ဝဝခန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း များကို ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူထားပြီး ပစ္စည်းများရောက်ရှိလာပါက ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း အမြန်လဲလှယ်နိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာထွန်းနိုင် က ပြောဆိုခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ လူစည်ကားရာ နေရာများဖြစ်သည့် ဈေးများ၊ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ ဘူတာများ၊ ကားဂိတ်များ စသည့်နေရာများတွင် နှစ် ကာလကြာရှည်စွာ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် 11KV သို့ မဟုတ် 6.6 KV လျှပ်ကာမပါသည့် ACSR ဓာတ်ကြိုး များကို လျှပ် ကာပါသည့် Space Area Cable (SAC) များနှင့် လဲလှယ်ပေးခြင်း၊ ၄ဝဝ ဗို့ ရိုးရိုးကြေးကြိုးများ အစား လျှပ်ကာပါသည့် ABC Cable များဖြင့် လဲလှယ် ခြင်း၊ ရှုပ်ထွေး Service များအား ရှင်းလင်းခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ သည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်အတွင်း လျှပ် ကာမပါသည့် ACSR ကြိုးများအစား လျှပ်ကာပါသည့် SAC Cable ၃၄ ဒသမ ၂၂၄ မိုင်ကို လဲလှယ်ခြင်း၊ ၄ဝဝ ဗို့ HTBC ကြေးကြိုးများနေရာတွင် လျှပ်ကာပါသည့် APC Cable ၄ဝ ဒသမ ၈၉ မိုင်ကို လဲလှယ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်း SAC Cable ၂၆ ဒသမ ၂၆ မိုင်ကို လဲလှယ်ခြင်း၊ ၄ဝဝ ဗို့ကြိုးများကို ABC Cable ကြိုးများဖြင့် ၂၁ ဒသမ ၄ မိုင် လဲလှယ် ခြင်းအပြင် တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်း SAC Cable ကြိုး များဖြင့် ၁၃ ဒသမ ၃၅ မိုင်ကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ၄ဝဝ ဗို့ ABC Cable များကို ၄၉ ဒသမ ၅၄ မိုင် လဲလှယ်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြောက်ပိုင်း ခရိုင်အတွင်း SAC Cable ကြိုးများကို ၅၁ ဒသမ ၃၂ မိုင်အတွက် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ABC ကြိုးများကို ၇၈ ဒသမ ၂၅၅ မိုင် ပြောင်းလဲခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေး ဥပဒေတွင် ထောင်ဒဏ်တစ်လ ထည့်သွင်းရန် တိုက်တွန်းပြော
ကတိသစ္စာပြုပြီးတဲ့ သတင်းမီဒီယာကောင်စီ တကယ် အလုပ်လုပ်နိုင်မလား
‘ရဲဝင်းကာရိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားက သိပ်မတူပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆ?
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင် ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းကြောင့် ကျောင်းများ အားလုံးပိတ်
စပိန်နှင့်ပွဲတွင် ပြန်ကစားနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း မက်ဆီပြောကြား
ကောင်းမှုတော်စေတီကို ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်မှစတင်၍ အဖြူရောင် ဆေးသင်္ကန်း နေ့ည ကပ်လှူမည်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိ အမျိုးသမီးအဆောင် ငါးခု၏ အဆောင်ပိတ်ချိန် ည ၇ နာရီသို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်